Nabadii ka Dhalatay Degaanka Somalida oo Dhamaystir u Baahan – Rasaasa News
Nabadii ka Dhalatay Degaanka Somalida oo Dhamaystir u Baahan
Dec 17, 2010 Eritrea, ethiopia, Jwxo-shiil, nabad diid, Nabadii ka Dhalatay Degaanka Somalida oo Dhamaystir u Baahan, Ogaden, ONLF, peace in ethiopia, peace in ogaden
Wada shaqayn dhexmarta dawlada dhexe iyo ururka ONLF ee nabada qaatay waxay si buuxda u dhamaystiri kartaa nabad ka dhalata degaanka Somalida Ogadeeniya iyo waliba keenida inta wali ka shakisan nabada uu qaatay ururka ONLF.
Ururka ONLF, ee nabada qaatay ayaa waxay muujiyeen geesinimo iyo adkaysi kolkii ay si geesinimo leh ku yimaadeen dalkii ay colaadu u dhaxaysay 17 sano. Waxayna muujiyeen adkaysi badan kadib kolkii ay ku sugnaayeen dalka mudo todoba bilood ah, iyaga oo kolkii hore ka yimid nolosha ka jirta dalalka reer galbeedka, kana yimid danahoodii gaar iyaga oo u adkaystay in ay ka dhabeeyaan nabadii ay u qaadeen dadweynaha.
Dawlada degaanka ayaa intii ay nabadu ka dhalatay degaanka Somalida waxay samaysay talaabooyin ay hoos ugu dhigayso niyada masuuliyiinta ururka ONLF ee nabada qaatay iyada oo ka talaabsatay ururka, xidhiidhyo hoosena la yeelatay saaxiibo hore degaanka uga shaqayn jiray baryihii dambena dibadaha ku noolaa iyaga oo hore degaanka uga cararay dambiyo ay galeen dartood.
Talaabooyinkaas dawlada degaanka ayaa dibadaha ka abuuray su,aalo badan oo ay ka mid tahay ururka ONLF ee nabada qaatay ma dadkii hore Kilalka uga cararaybaa. Waxaa kale oo uu kilalku abaabulay Jaaliyado aan hore ururka ONLF ula shaqayn jirin oo kaliya isu abaabulay lacag baa Kilalka laga heli ee aan is abaabulo.
Arimahaas waxay keeneen niyad jab, waxaana jira dad badan oo gawsaha qaniinsan oo isugu jira, ururka ONLF ee nabada qaatay, odayaashii iyo aqoonyahankii ka soo shaqeeyey nabada, kuwaas oo aan ku faraxsanayn sida ay dawlada degaanku u maamushay arimaha.
Waxaa iyaguna aad arimahaas gacan dhaafka ah ee ka timid Kilalka ka cadhooday xubno ka tirsan kooxda Jwxo-shiil, oo sugayey saldhigashada nabada uu qaatay ururka ONLF. Xubnahaas waxay diyaar u yihiin in soo raacan nabada ka dhalatay degaanka Somalida, waxaana ka mid ah kuwa ugu mihiimsan kooxda Jwxo-shiil.
Dawlada dhexe iyo Masuuliyiinta dawlad degaanka Somalida waxaa la gudboon in ay ka shaqayso kulamo dhexmara xubnaha ururka ONLF ee nabada qaatay iyo nabadiidka wali dibadaha ka riyoonaya si ay ugu qanciyaan nabada. Waxaa kale oo wali laga war dhawrayaa talaabooyinka siidaynta maxaabiista wali xidhan, arintaas oo rumaynaysa heshiisyadii la galay qancina kara dadka wali shakisan.
Warar hoose ayaa waxay sheegayaan in xubno badan oo wali ka tirsan kooxda Jwxo-shiil, ay jecel yihiin in ay nabad qaataan lana kulmaana masuuliyiinta ururka ONLF ee nabada qaatay. Arimahaas oo u baahan in ay dawladu fiiro gaar ah siiyo inta ayna arimo kale ku dhalan xubnahaas.
Ururka ONLF, oo Xafiis ka Furan Doona Magaalada Addis Ababa
Jwxo-shiil: Adeereey Waan ku Baryahayaaye I Cafi!